पेट दुख्ने तथा फुल्ने समस्या देखियो ? यी उपायबाट पार्नुहोस् चट – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/पेट दुख्ने तथा फुल्ने समस्या देखियो ? यी उपायबाट पार्नुहोस् चट
काठमाडौँ । कहिले काही खानेकुरा नमिल्दा हाम्रो शरिरमा बिभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने गर्छन् । बिभिन्न खानेकुराले पेट दुख्ने समस्या पनि हुन्छ । तर कुनै यस्ता खानेकुरा पनि छन् जुन खाँदा पेटको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।कहिलेकाही पेटको समस्या हुँदा पेट दुख्ने, फुल्ने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, पातलो दिसा हुने, गोटा पर्ने हुन्छ । यदि यस्तो समस्या भएमा केही खानेकुरा खानाले यो समस्या समाधान हुनछ ।
पेटको समस्या कहिलेकाही पानीको कमीले पनि हुनसक्छ । हामिले खानेकुरा खाँदा सजिलै पच्ने खानेकुरा खानुपर्छ ।यदि पेटको समस्या भएमा मासुका परिकार खानुहुदैन । प्रशस्त पानी पिउनुपर्दछ । यदि पखाला लागेमा र गोटा परेमा पानीको कमीले हुनसक्छ । त्यसैले प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।पेटको समस्या भएमा नरिवल पानी पिउनु पनि राम्रो हुन्छ । यसमा नरिवल पानीमा पोटासियम र सोडियम पाइने हुनाले एक गिलास नरिवलको पानी पिउनुपर्छ ।
मेवामा पापैन नामक इन्जाइम पाइने हुनाले ग्यास्ट्रिक र खाना नपचेमा यो खानु राम्रो हुन्छ । पेट दुखेको बेला प्रशस्त पोटासियम पाइने खानेकुरा खानुपर्दछ ।त्यसैले काँचो केरा खानु राम्रो हुन्छ । किनकी यसमा आइरन, फोलेट, फाइबर हुन्छ । यसले पाचन क्रियामा सहयोग पुर्याउछ । ग्यास्ट्रिक भएमा वा पाचन समस्या समाधान गर्न दही खानु राम्रो हुन्छ ।